IZimbabwe - Wikipedia
IZimbabwe, ngokusesikweni iRiphabhlikhi yaseZimbabwe, lilizwe elivaliweyo elikuMzantsi-mpuma Afrika, phakathi kweZambezi kunye neLimpopo Rivers, ijikelezwe nguMzantsi Afrika emazantsi, iBotswana
Ulwimi lwaseburhulumenteni: .
Isiphaluka: 390,757 km2
Uluntu: 15,092,171 (2019)
kumazantsi-ntshona, iZambia emantla, kunye neMozambique ngasempuma. Ikomkhulu nesixeko esikhulu yiHarare. Isixeko sesibini ngobukhulu yiBulawayo. Ilizwe elinabantu abamalunga ne-15 lezigidi, iZimbabwe ineelwimi ezili-16 ezisemthethweni, isiNgesi, isiShona nesiNdebele zezona zixhaphakileyo.
Ukusukela ngenkulungwane ye-11, ummandla ngoku obizwa ngokuba yiZimbabwe ubuyindawo yamazwe aliqela alungelelanisiweyo kunye nezikumkani ezifana nezikumkani zamaRozvi, iMutapa kunye noMthwakazi, kunye nendlela enkulu yokufuduka kunye norhwebo. Inkampani yaseBritane yoMzantsi Afrika iCecil Rhodes yaqala ukucanda umhlaba okhoyo ngo-1890 xa yoyisa iMashonaland kwaye kamva ngo-1893 iMatabeleland emva kochaso oluqatha lwamaMatabele awaziwa njengeMfazwe yokuQala yaseMatabele. Ulawulo lwenkampani lwaphela ngo-1923 ngokusekwa kwe-Southern Rhodesia njengekoloni laseBritane elizilawulayo. Ngo-1965, urhulumente wabamhlophe abambalwa wabhengeza inkululeko njengeRhodesia.
Urhulumente wanyamezela ukubekwa yedwa kumazwe ngamazwe kunye nemfazwe yeminyaka eli-15 yabanqolobi kunye nemikhosi yamazwe amnyama; oku kwafikelela kuvuthondaba kwisivumelwano soxolo esathi samisela ugunyaziso lwehlabathi jikelele kunye ne de jure sovereignty njengeZimbabwe ngoAprili 1980. IZimbabwe emva koko yazimanya neCommonwealth of Nations, nalapho yanqunyanyiswa khona ngo 2002 ngenxa yokwaphulwa komthetho wezizwe ngezizwe ngurhulumente wayo ngelo xesha phantsi kukaRobert Mugabe. eyarhoxa kuyo ngoDisemba 2003. Urhulumente ozimeleyo lilungu leZizwe eziManyeneyo, uMbutho woPhuhliso lwaMazwe aseMazantsi e-Afrika (i-SADC), iManyano ye-Afrika (i-AU), kunye neMarike ePhakamileyo yaseMpuma nakumaZantsi e-Afrika (COMESA). Yayikade yaziwa ngokuba yi "Jewel of Africa" ​​ngenxa yempumelelo yayo enkulu.
URobert Mugabe waba yiNkulumbuso yaseZimbabwe ngo-1980, ngethuba iqela lakhe iZANU–PF laphumelela unyulo emva kokuphela kolawulo lwabamhlophe abambalwa; wayenguMongameli waseZimbabwe ukusuka ngo-1987 de washiya isikhundla sakhe ngo-2017. Phantsi kolawulo lukaMugabe, iziko lokhuseleko lombuso lalilawula ilizwe kwaye lalijongene nokunyhashwa kwamalungelo oluntu. Ilizwe liye lehla kwezoqoqosho ukusukela ngoo-1990, lijongene nokuntlitheka okuliqela kunye nokunyuka kwamaxabiso ezinto endleleni.
Ngomhla we-15 kweyeNkanga yowama-2017, emva koqhanqalazo olungaphaya konyaka oluchasene norhulumente wakhe kwakunye nokudodobala koqoqosho lwaseZimbabwe, uMugabe wavalelwa eluvalelweni ngumkhosi wesizwe welizwe kubhukuqo-mbuso waza ekugqibeleni warhoxa emva kweentsuku ezintandathu. U-Emmerson Mnangagwa sele esebenze njengomongameli waseZimbabwe.
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-21 EyoMqungu 2022, kwi-07:23